Sideen u abuuri karaa dib u eegis tayo leh oo istiraatiijiga ah ee barta internet-ka ah ee istaraatiijiga SEO-ga ah?
Xaq, xaqiiqdii waa lagama maarmaan in la abuuro tayada dabiiciga ah ee dabiiciga ah ee istaraatiijiga SEO-ka ah si loo gaaro mawqifka guuleysta oo ka baxo tartanka. Fikrad ahaan, ganacsigaaga waxaa la filayaa in lagu arko si aad u sareeya liiska natiijooyinka raadinta ee khuseeya (Google SERPs). Taasi waa sababta websaydhkaagu ubaahan yahay in ay iyaga loola macaamiloodo dhinaca - labadaba tayada iyo qorshaha SEO ee guud ahaan. Nasiib wanaag, waxaan hayaa aragti, iyo tixgelinno macquul ah oo laga soo xigtay wakaaladaha khaaska ah ee SEO waxaan isticmaalay dhowr bilood ka hor. Halkan waa!
Xooga saara Kala duwanaanta
- sub ohm differences. Waxaan ula jeedaa wax walba waa in ay u muuqdaan dabiiciga - qaabka dhabarkaaga ah waa in ay u ekaataa mid kala duwan oo sax ah intii suurtagal ah in la abaalmariyo oo la siiyo abaalmarin sare leh Google. Fikrad ahaan, shaashaddaada gadaasheed waxay ka koobnaan doontaa domainska ugu sareeya (bogga internetka EDU, bogagga wararka iyo bogagga warbaahineed, boodhka viral, ilaha B2B, iwm. ), bogagga warshadaha la xidhiidha, waraaqaha, iyo bogagga shabakadaha GOV.
Habka kaliya ee lagu raaxaysto waxqabadka wanaagsan ee udhexeeya dhabarkaaga iyo istaraatiijiyada SEO waa in la ilaaliyo ku-tiirsanaanta. Muuqaal ahaan, haddii dukaankaaga dukaanka uu kula tacaalayo qalabka elektaroonigga ama qalabka, weligaa ha ku dhejin boggaga internetka ama tusmada, tusaale ahaan daryeelka caafimaadka ama kirada. Haa, mararka qaarkood ilo badan oo aan khusaynin ayaa u muuqan kara kuwo soo jiidasho leh oo leh awoodooda bogga sare, oo laga yaabo inay sidoo kale laga helo meel 80 qiyaasood ah. Hase yeeshe, ku-tiirsanaanta ku-meel-gaadhka waa WAA INAAD Xaalad kasta. Haddii kale, raadiyayaashu raadinayaan waxay u badan tahay inay u sheegaan kuwa isdaba jooga ah ee awood buuxda u leh inay isku dayaan inaad isku daydo inaad isku daydo.
Xaliyaadka la xariira
Laakiin weli waxaad la. Si aad u hesho macluumaad ah oo ku haboon oo ku tiirsan dib u xoojinta istaraatiijiga SEO ee website-kaaga, waxaan kugula talineynaa in aad isku xirto wax kasta ood cajiib leh oo aad aaminsan tahay, taas oo ku saabsan mawduucyada caanka ah ee suuqaaga. Taasna, iskudubaanku wuxuu tilmaamayaa bogga internetka ee boggaga soo degaya ee la filayo in uu bixiyo xalalka saxda ah, jawaabta, soo jeedinta, ama ugu yaraan qaddar taxaddar leh. Waxaad sidoo kale isticmaali kartaa noocyo kaladuwan oo kala duwan oo muhiim ah si aad dhabarkaaga u siiso culeys dheeraad ah. Waxaan ula jeedaa inaad xor u tahay inaad labadaba labadaba (gaaban), iyo foomka muddada dheer. Waxaad sidoo kale tixgelin kartaa isticmaalka erayada macnaha guud ee muhiimka ah. Sidaa samee, hubso in ereyada muhiimka ah ee ku jira dhabarkaaga dambe ay si toos ah uga soo galaan boggaga internetka, iyo sidoo kale inta kale ee ka baxsan goobta bogga.
Dabcan, nooca ugu fiican ee qoraalka ah waxaa lagu qeexi doonaa ujeedada koowaad ee boggaaga internetka
. Si kastaba ha ahaatee, xusuusnow, in dhammaan baaritaanada guud aysan sameyn doonin, dabcan, haddii aad caqli ku filan tahay inaad qaabeyso bog. Taas micnaheedu waa inaad ka fekerayso in aad bogga soo dhejiso kuugu soo jiido jadwalka suuq geynta si aad u booqato martidaada ficil gaar ah, sida samaynta rukunka, buuxinta foomka, soo dejinta qaar ka mid ah waxyaabo qiimo leh, ama xitaa isla markiiba qaado go'aanka iibso adiga. Gabagabada, halkan waxaa ku jira qaar ka mid ah tixgelinta guud ee ku saabsan qoraalka qoraalka ah ee soo jeedinaya guryaha soo socda: cayaarta saxda ah, sifo calaamadeysan, muuqaal guud, xuruufta jumlada, iyo sidoo kale LSI.